“नेपाली कांग्रेसका,नेताले विवाहित, महिलालाई काँसघारीमा लगेर… – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“नेपाली कांग्रेसका,नेताले विवाहित, महिलालाई काँसघारीमा लगेर…
4 months ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“काठमाडौं । स्थानिय एक नेता महिलालाई क र णी ग रे को अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । घटना रोतहटको हो । एक विवाहित महिलालाई क र णी ग रे को अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका स्थानिय नेता पक्राउ परेका हुन् ।”
“पक्राउ पर्नेमा देवाही गोनाही नगरपालिकाका ५० वर्षीय नावगेश्वर कुश्वाहा हुन् । उनी नेपाली कांग्रेसका स्थानिय नेता हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।”
“घटना तीन दिन अघि भएको थियो । उनले स्थानिय एक विवाहित महिलालाई बहाना बनाएर काँसघारीमा लगेर क र णी ग रे को बताइएको छ । आफुलाई तीनदिन अघि नेताले क र णी ग रे को भन्दै महिलाले नै उजुरी दिएपछि कुश्वाहा पक्राउ परेका हुन् ।”
“उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी अदालतवाट म्याद थप पनि भएको छ । अदालतवाट ५ दिन थप म्याद थप भएको बताइएको छ । महिलाका अनुसार आरोपीत कुश्वाहाले ३ दिन अगाडी घरयासी सामान लिने भनेर गरुडा बजारतर्फ लगेका थिए । त्यसपछि सामान खरिद नगरि बजारभन्दा केही पर जंगल तर्फ लिएर गएको महिलाले उजुरीमा उल्लेख गरेकी छन् ।(ताजा खबर बाट )
Previous “सुवास नेम्वाङको दाबी : भोलि विहान ८ बजे सुखद् समाचार दिन्छौं (के पार्टी एकता होला?
Next “बामदेव गौतम,ले राखे माग, ‘राष्ट्रिय सभाका,सांसद पनि प्रधानमन्त्री, बन्न पाउनुपर्छ’
“सत्ता फुत्तकिएसँगै, एमालेलाई,व्यापारी अग्रवालले,पनि लखेटे”
16 hours ago मेचीमहाकाली संवाददाता
“सर्वेन्द्र खनाल,एमाले बन्ने खबरले,किसान श्रेष्ठ,लाई छट्पटी”
“कानुन हातमा, लिएर,मधेशमा जनता भड्काउँदै, सिके राउत”
19 hours ago मेचीमहाकाली संवाददाता
पल र समीक्षा विवादको वास्तविकता के हो ? दुवैले दिए पालैपालो यस्तो स्पष्टीकरण
7 hours ago Mechi Mahakali
“मेरै छोरो केपी ओलीले फेरी पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँछ” : बुवा मोहनप्रसाद ओली
यी हुन् टिकटकमा १ अर्ब फलोअर्स भएका दुई व्यक्ति, कसरी भए यति चर्चित ?
8 hours ago Mechi Mahakali
श्री पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, कार्तिक ९ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ॐ ॐ